Sidee Maalintii labaad looga ciiday guud ahaan dalka | KEYDMEDIA ONLINE
Sidee Maalintii labaad looga ciiday guud ahaan dalka
Magaalooyinka Jowhar, Kismaayo, Baydhabo, Garoowe, Dhuusamareeb iyo guud ahaan deegaanada dalka ayaa sidoo kale si weyn looga dareemayaa dabaal degga maalinta labaad ee ciidul Adxa.
MUQDISHO, Soomaaliya - Maanta waa maalintii labaad ee Ciidda Carafo, waxaa si weyn looga ciidayaa Caasimadda Soomaaliya iyo guud ahaan dalka, waxaana magaalooyinka wadanka ka socda munaasabado waaweyn oo loogu dabaal degayo farxadda Ciidda.
Maagaalada Muqdisho ayaa si weyn looga dareemayaa maalinta labaad ee ciidda, waxaana lagu arkayaa dad raxan raxan u socda oo u damaashaad tegaya goobaha bilicdasan ee caasimadda.
Waxaa xiran goobaha ganacsiga qaar waxaana aad arkaysaa shacabka caasimada oo u socdaalaya goobaha ay ka socdaan dabaal dega munaasabadaha maalinta labaad, iyo qoysas caruurtooda u dalxiis gaynaya beeraha ku yaal duleedka Muqdisho.
Shalay oo aheyd maalinta Koowaad ee Ciidul Adxaa ayaa goobaha lagu Tukaday Salaada Ciidul Adxa ee Muqdisho waxaa ka mid ahaa Masjidka Is-bahaysiga iyo degaanka Daarusalaam, halkaas oo ay ku sugnaayeen Kumanaan Shacab oo tukashada salaada ay kala qeyb galeen Mas’uuliyiin kala duwan oo ka tirsan dowladda.
Kumanaan dadweyne ah ayaa shalay buux-dhaafiyay goobaha leyskugu yimaado Magaalada Caasimadda ah ee Muqdisho, sidda; xeebta Liido, Xeebta Jasiira, Daljirka Dahsoon, Beerta Nabadda iyo beerta Daaru-salaam, waxaana dadka isugu hambalyeeynayeen farxadda munaasabadda Ciidda.